မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXVII | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Arts & Humanities » မြစ်ဆုံရေကာတာအကြောင်း အမှားနဲ့အမှန် – – Myitsone Myths and Truths XXVII	3
Posted by Kyaemon on Nov 20, 2016 in Arts & Humanities, Business & Economics, Education, Think Different |3comments
(“Brazil ဆီက အတုယူစရာ”ကိုလဲအောက်နားမှာ တင်ပြထားပါကြောင်း)
ကမ္ဘာ့ဘဏ်အရာရှိကဆို။။. ဆင်းရဲနိုင်ငံတွေကရေကာတာလုပ်တာကို ချမ်းသာနိုင်ငံတွေကလိုက် မ တားသင့်ပါ
၂၀၀၆ စက်တင်ဘာလ ၈ ရက်
(ရှေ့ဆောင်းပါး # ၂၆ က John Briscoe လဲ ကမ္ဘာ့ဘဏ် ရေဘက်ဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်အကြံပေးအရာရှိပါ၊ခုGrey ပြောတာကဒီသဘောဘဲ)
—- ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံကလုပ်မဲ့ရေကာတာ ကိုပေးလုပ်စေလိုကြောင်း၊
ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေကပေကြိုး စည်းကမ်းသစ် (ဝါလုံး)နဲ့ ဟန့်တား ဘို့ မလိုကြောင်း၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ် ရေဘက်ဆိုင်ရာအဆင့်မြင့်အကြံပေးအရာရှိ ချုပ် David Grey ကဆိုပါတယ်၊(ချမ်းသာနိုင်ငံလုပ်ပုံကဒီလိုပါ၊မိမိတို့ထောက်ပံ့ထားတဲ့ International Rivers တို့လို NGO
တွေနဲ့ဒေသခံလူတွေကိုလိုက်”စည်းရုံး”ပြီး”သက်ဆိုင်ရာကို “အကြပ်ကိုင်”တာကိုဆိုလိုတယ်၊ Grey က အထက်ပါလိုပြောတာက ၁၀ နှစ်တောင်ကျော်လာပါပြီ။ဆရာဦးထွန်းလွင်တို့
ထက် ၅နှစ်စောပြီးပြောတယ်၊ ဒီလိုကမ္ဘာ့ဘဏ်ကထိပ်သီးပါရဂူတွေရဲ့စကားတွေကိုလျစ်လျူရှုမိတာက မတော်သင့်ပါ)
ကျနော်တို့ချမ်းသာအောင်လုပ်နည်းအတိုင်း ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေက လိုက်လုပ်တာကို “မလုပ်ရဘူး” လိုက်ပြောနေကြတယ်လို့
စက်တင်ဘာ ၄ ရက် Australia Brisbane မြို့ က အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြစ်ကြောင်းကွန်ဖရင့်မှာDavid Grey က ပြောပါတယ်၊
—– မြစ်ရေတွေကိုကွပ်ကဲထိန်းသိမ်းဘို့ ရေကာတာ နဲ့ ရေအဆောက်အအုံကိုတည်ဆောက်ကြ
တယ်၊နာရီ လျှာလိုရေကာတာတွေက တကြော့ပြန် ခေတ်စားလာတယ်၊ ပိုပိုပြီးလက်ခံလာ ကြတယ်၊
ဒီအတွက် ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ရေ ကွပ်ကဲထိန်းသိမ်းမှုငွေချေးပေးဘို့ဆုံးဖြတ်၊ခံဝန်ပြီးသားပါ၊
—- (ဖော်ပြသလို ၂၀၀၆ ကမ္ဘာ့နှီးနှော်ဖလှယ်ပွဲမှာ Grey ကလူသိရှင်ကြားမိန့်ကြားခဲ့တယ်၊ဆရာ ဦးထွန်းလွင်ရဲ့
၂၀၁၁ မိန့်ခွန်းထက် ၅ နှစ် စောတယ်၊တယောက်တပေါက်ပါ၊
တဦးကရေကာတာ ကိုအားပေးတယ်၊တဦးက ၇ လုံး စလုံးရပ်ပြစ်ဘို့ပြောတယ်၊ တဦးကခေတ်စားလာတယ်၊
တဦးက ၅ နှစ်ကြာ ခေတ်မစားတော့ဘူးပြောတယ်၊ ဘယ်သူကရေကာတာ အကြောင်းကိုပိုပြီးနားလည်မလဲ?
ပြီးတော့ ရေကာတာဆောက်ရင် မြစ်ကောမယ် လူတွေငတ်မယ်ရေကာတာပြိုကျမယ်
ဆိုရင် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကရေကာတာတွေ အတွက် ဘာကြောင့် $ သန်းချီချေးငွေ ထုတ်ပေးနေ တာလဲ?)
“မျက်ကန်း ၆ ဦး နဲ့ ဆင်တကောင်” ပုံပြင် လို တဦးဦး က “ကွက်” ပြီးမြင်တာ “ကွက်”ပြီးပြောတာ၊
လွှတ်သွားတာ၊ခြုံငုံပြီးမကြည့်မိတာကြောင့် အဖြေမှန် မ ရလိုက်တာဖြစ်ဘို့များတယ်၊သေချာ
ဆင်းရဲနိုင်ငံတွေက မိမိတို့လိုအပ်တဲ့ရေတွေရဲ့ ၂၀ % မှ ၃၀ % ထိသာသိုလှောင်နိုင်ပြီး
ချမ်းသာနိုင်ငံက ၂၀၀ % နဲ့ (လိုတာဟက် တစ် ဆ)ပိုပြီးရေတွေကိုသိုလှောင်နိုင်ကြောင်း
ရေအလုံအလောက်ရရင် စိုက်ပျိုးရေးအောင်မယ် လူတွေချမ်းသာမယ်ဖြစ်လို့
(ရေကာတာဆောက်တာကို မ ကောင်းကြောင်းပြောသူတွေသိသာရန်မှာ
တကယ် ဘက်စုံအောင် တတ်တဲ့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ကျွမ်းကျင်သူ ၂ ဦး
ရှိပြီနော်၊ လုပ်သက်ဝါရင့်တဲ့အကြီးတန်း အကြံပေး အရာရှိတွေပါ၊
ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရော သူတို့၂ ဦးစလုံး ပါ ရေကာတာကို အားပေးကြ
တွေတင်မယ်၊ ဆိုရင် ဘာကြောင့် ဂျပန်ဆီကနေ ဆည်တွေရေကာတာတွေကို ပြုပြင်မွမ်းမံဘို့ နှစ်စဉ် $ သန်းချီ ချေးယူရတာလဲ?၊ ဒီဟာကြတော့ ဘာဖြစ်လို့
ရေငုံနေကြတာလဲ ဆရာကြီးတို့? စဉ်းစားစရာ ပါ)
——– Grey said he sees large dams as the solution of last resort, because they invariably entail social and environmental damage. But popular participation, better governance, and sharing benefits can make dams important assets, he said.
Brazil အရှေ့မြောက်ဘက်ပိုင်းမှာ ဒေသခံတွေက မိမိတို့ရဲ့ဒေသကို လာပြီးရေကာတာတည်ဆောက်ဘို့လိုလားကြတယ်၊
တဒေသနဲ့တဒေသ အချင်းချင်း အလုအယက်ပြိုင်ဆိုင်ပြီးဘိတ်ခေါ်ကြိုဆိုကြတယ်၊
(တော်တော်ဆန်းပါတယ်၊ မြန်မာပြည်အပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှတဝှိုက် ဥပမာ Cambodia, Malaysia ရှိ ဒေသ တော်တော်များများနဲ့တခြားစီပါလား)၊
“သိသူဖော်စား၊ မသိသူကျော်သွား၊” ——–
အကြောင်းမှာ သက်ဆိုင်ရာ ဒေသခံတွေ ကို (သူစိမ်းလိုမဟုတ်ဘဲ မိသားစု)
“အစုဝင်”(ပိုင်ရှင် သို့မဟုတ် ပိုင်ရှင်နီးပါးလို)သဘောထားဆက်ဆံကိုင်တွယ်ကြ တာပါ၊
လျှပ်စစ်ရောင်းရငွေရဲ့ ၀.၅ % မှ ၁.၀ % အထိ ကို အဲဒီဒေသခံတွေ အတွက်
ဖွံ့ဖြိုးစာရိတ်ရံပုံငွေ ဆိုပြီး ချီးမြှင့်တယ်၊စာသင်ကျောင်း လမ်း ဆေးခန်း ဈေး တွေ တည်ဆောက်ဘို့ရံပုံငွေပါ၊ အနှစ် ၅၀ ထိ ချီးမြှင့်ဘို့ လုပ်ထားတယ်လို့ပညာရှင် Grey က ဖောက်သယ်
ချပါတယ်၊ သာဓု သုံး ကြိမ်ခေါ်တယ်နော် ဆရာကြီးတို့၊နတ်လူကြားကြားသမျှပါ
ပြိုင်ဆိုင်ကြတာကရွှေတွင်းကြီးပေါ်ထိုင်မိရက်သားဖြစ်လို့တင်စားပြီးGrey ကပြောပါ တယ်၊
ခုလို ဖွံ့ဖြိုးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံမဖြစ်နိုင်လို့ Grey ကပြောပါတယ်၊ (မြစ်ကောမယ်၊ပျက်မယ်၊လူတွေဒုက္ခရောက်မယ်၊ငတ်မယ်၊ပြိုကျမယ်၊အမိုက်တွေ
တခြားစီပါလား၊ ဘယ်လိုလဲ? မရှင်းလို့ပါဆရာကြီးတို့)
_______ _______ “Countries that have only one short rainy season … and countries where rainfall varies from year to year by 30 to 40 percent … these are the poorest in the world,” he said. “Australia is an exception. Australia imported skill and imported capital and solved the problem. If Australia hadn’t been colonized it might be different,” he said.
တုန်းက $ ၁.၅ ဘီလျံကုန်ကျပြီး မြစ်တွေကိုပြုပြင်တယ်လို့ Grey က
ပြောတယ်၊ရေကာတာတွေအားလုံးဖြုတ်ကြည့်ပါလားလို့ Grey ကမေး
လုပ်ပြီးရေငတ်တဲ့မြို့တွေကို မလွှဲမသွေ ရေပို့ရတဲ့သဘော)၊
ဒီနေရာပြောရမှာက Australia ဟာ တော်တော်များများနေရာကပူပြင်းတဲ့သဲ
ဈေးသက်သာ ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ် ရေအားဆိုရင် ၁ cent၊ အနုမြူ အားဆိုရင် ၂ cent၊ မီးသွေး အား (နဲ့ရေနွေးငွေ့) ဆိုရင် ၃ cent၊
ကုန်ကြမ်းမလိုပါ၊ လျှပ်စစ်လဲမှန်မှန်ထုတ်နိုင် ——–
တင်သွင်းတာခြင်း load factor တူတူ ရေအားက လျှပ်စစ်စွမ်းအားကိုပိုထုတ်ပေးနိုင်
ရပ်လိုက်သွားလိုက် ပြတ်တောက်ပြတ်တောက် ဖြစ်ကြတဲ့လေအားလျှပ်စစ် တို့ နေရောင်ခြည်လျှပ်စစ်တို့
ကိုအထောက်အကူ ပြုနိုင် ——-
စီးဆင်းရေက မကုန်းခန်းနိုင်၊နေကြောင့် အဖန်တလဲလဲ ပြန်ရလာနိုင်
လျှပ်စစ်ထုတ်ဘို့ချက်ချင်း စ နိုင် အမြင့်ဆုံး အရှိန်ထိ အမြန်ဆုံးတက်နိုင်
(ဓာက်အားကျချိန် မှာချက်ချင်းပြန် နိုး နိုင်)
ဆည်လုပ်ငန်းလုပ်နိုင်၊ရေဘေးရေလွှမ်းမှု နဲ့ရေချောက်သွေ့မှုသက်သာအောင် ရေထိန်း သိမ်းရေး လုပ်နိုင်၊သောက်သုံးရေပို့ပေးနိုင် In addition toasustainable fuel source, hydropower efforts produceanumber of benefits, such as flood control, irrigation, and water supply.
(စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနတွေကမှားသလား မိုးလေဝသဌာနကဘဲမှန်မလား နှစ်ဌာနကပူးပေါင်းပြီး
Kyaemon says: David Grey အကြောင်း
Kyaemon says: ၂၈။ http://mandalaygazette.com/227188